Umaki: okuthunyelwe okuhlobene | Martech Zone
Maka: okuthunyelwe okuhlobene
Namuhla, bengibheka kabili i-athikili ebengiyibhalile futhi ngabona ukuthi okuthunyelwe okuhlobene okuvelile bekuvela eminyakeni eyi-9 eyedlule endaweni yesikhulumi engasekho. Ngakho-ke, nginqume ukubhekisisa izinketho zokuthunyelwe okuhlobene neJetpack kusayithi lami bese ngibona ukuthi ngingakhawulela yini ibanga ledethi. IJetpack yenza umsebenzi omuhle wokukhetha okuthunyelwe okufanelekile okufanayo, kodwa ngeshwa akunakho
Uma usebenzisa i-WordPress, elinye lama-plugins akho adingekayo kufanele kube yi-plugin ye-Post Post ehambisanayo. Lokho kusho, ngibonile ukuthi ivolumu yamagama asemqoka abethunyelwa namaDaily Reads wami ibihlasela imiphumela ye-Post Post. Futhi, kwangimangaza impela ukuthi i-plugin ye-Related Posts inikeze kuphela uhlu lokuthunyelwe okuhlobene ngaphambi kokuthunyelwe okufundayo! Kuthiwani uma ushintshe umqondo wakho (njengoba ngivame ukwenza!)… Akufanele wena
Ukudonsa I-Blog: I-Alpesh Nakars 'Blogosphere
NgoLwesine, July 26, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Amaviki ambalwa edlule abe nesihluku. Ngiqale iphrojekthi i-Wiki ukuze ngihambisane namaphrojekthi engiwenzayo, ngiqashe umqambi osemusha ozongisiza, ngiyekile emsebenzini kumqashi wami futhi ngamukela isikhundla esisha ngokuqala kwendawo. Angifuni ukushisa noma yimaphi amabhuloho nomqashi wami wangaphambilini (ebengikuthanda ukusebenza naye futhi ngimenzela) ngakho-ke ngixakwe ezingxoxweni nabasebenzi, abaholi, namakhasimende akhethekile ambalwa
NgoMgqibelo, July 7, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
UTom ucele ukuthi ngiphakamise i-blog yakhe, i-PGA Auctions. Futhi ngiyajabula ukuphoqa! Ibhulogi likaTom limayelana nebhizinisi lakhe le-eBay futhi ubhekisisa izindali ngakho-ke kunabancintisana abaningi laphaya futhi sidinga ukumtholela usizo! Nawa Amathiphu akho weBhulogi: Okokuqala, qiniseka ukuthi ulungisa isixhumanisi esikuPosi nesixhumanisi emuva kubhulogi yami… lapho ukopisha unamathisela